माओवादी नेता वर्षमान पुनको पछिल्लो समयको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो हुदैछ?:: Mero Desh
Published on: १७ आश्विन २०७८, आईतवार ०५:२९
१७ असोज, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र का नेता तथा पूर्व अर्थ एवं ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन (अनन्त)को स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । पुन थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित समि तिभेज अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
चिकित्सकका अनुसार पुनको शरीरमा रहेको अत्यधिक जण्डिसको मात्रा अहिले केही घटेको छ ।सामान्यतः स्वस्थ मानिसको रगतमा हुने बिलुरुविन नामक तत्वको मात्रा १.५ देखि ८ बिन्दुसम्म हुने गर्छ । तर, पुनको रगतमा बिलु रुविनको मात्रा अनियन्त्रित रुपमा बढेर ३४ पुगेपछि चिकित्सकहरुले बैंकक गएर उपचार गर्न सुझाव दिएका थिए ।
‘अहिले बिलुरुविनको मात्रा घटेर २७ मा आएको छ’, उपचार मा संलग्न डा. नाथाभुत सिरिमोन्ता पोनको भनाइ उ,द्धृत गर्दै पुनकी पत्नी एवं पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले भनिन् ।
घ,र्तीका अनुसार चि,कित्सकले नयाँ औ,षधि चलाएका छन् । उक्त औषधिले राम्रो काम गर्न थालेको उनले उल्लेख गरिन् । ‘नयाँ औषधिले राम्रो काम गर्न थालेको छ’, घर्तीले भनिन्, ‘नेपा लबाट आउँदाको भन्दा अहिले राम्रो भएको छ ।’
यद्यपि बान्ता भने नरोकिएको जानकारी उन ले दिइन् । खाना खान मन नलाग्ने समस्याका कारण पुनलाई स्लाइनको माध्य मबाट खानेकुरा दिइएको छ ।
जण्डिसको मात्रा अत्यधिक बढेसँगै उच्च ज्वरो आउनुका साथै निरन्तर बान्ता हुन थालेपछि पुन लाई गत आइतबार ललित पुरको सुमेरु अस्पता ल लगिएको थियो । तर, नेपालमा उपचार कठि न भएको भन्दै चि,कित्स,कले बैंक,क जान सुझाए को पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।
चार व,र्षअघि पनि नेपालका विभिन्न अस्पताल र भारतको मे,दान्त सिटी अस्पतालमा उपचार सम्भव न,भएपछि अ,त्यन्त जटिल अवस्थामा पु,नलाई एयर एम्बुलेन्समार्फत बैंकक ल गिएको थियो । पुन जन्मजात जण्डिससम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन् ।